Zvizhinji nezve Python. Izvo zvikamu zvemutauro | Linux Vakapindwa muropa
Zvizhinji nezve Python. Izvo zvikamu zvemutauro
In the Nyaya yapfuura Isu takanga takurukura zvikonzero nei tichifanira kudzidza mutauro wePython programming uye maitiro ekuita yazvino vhezheni. Ino ndiyo nguva yekudzidza zvikamu zvemutauro nemimwe mienzaniso.
1 Zvizhinji nezve Python. Maturusi ekutanga
1.2 Kupinda uye kuratidza data
Zvizhinji nezve Python. Maturusi ekutanga
Python ine akawanda ma module anochengetedza kodhi yekunyora nguva nekuti anounza zvakafanorongwa mabasa atinoda. Kunyangwe mamwe acho akafanogadzirwa, mamwe anofanirwa kuwedzerwa sezvatinoda ivo.
Pane nzira mbiri dziri nyore dzekuwedzera. kubva kunzvimbo dzekuchengetera kwako (sekunge yaive chirongwa chakasarudzika) kana uchishandisa maneja wepaketi anonzi PIP. Maitiro echipiri anovimbisa kuti tine shanduro dzazvino kwazvo.
Rangarira kuti rairo yekutanga zvirongwa ndeye python3 nombre_del_programa uye kwete python nombre_del_programa.
Ngatitarisei kana isu tine PIP yakaiswa
Iwe unofanirwa kugamuchira meseji yakafanana neiyi
Kana iwe usina Pip yakaiswa iwe unogona kuzviita kubva kumaneja wepakeji wekugovera kwako. Unoda pasuru yacho
Kupinda uye kuratidza data
Tiri kuzonyora chirongwa chedu chekutanga. Zvichida kuti kana ukateedzera nekunamatira zvirongwa, hazvishande. Ndinokurudzira kuti uzvinyore. Ita shuwa yekuremekedza nzvimbo kana dzisingashande.
Mutsara wekutanga wechirongwa tinodhinda meseji yekukwazisa. Muchipiri, tinotsanangura musiyano unonzi "zita" tobva taipa semhinduro semubvunzo, unonzi ani zita rako? Ziva kuti Input ine mabasa maviri, ekuratidza meseji uye nekupa kukosha kwemhinduro kumusiyano.
Mutsara wechitatu, iyo yekudhinda yekuraira inodzoka, kupurinda maviri marudzi ezvinyorwa. Kwaziso yakatsanangurwa (Chii chinogara chiri mumakotesheni) uye kukosha kweiyo kusiana (Variables anogara asina makotesheni. Zvinosiyana uye zvisingaenzaniswi zvemukati zvakapatsanurwa nekoma (,).
Mutsetse wechitatu isu tinopa kune anoshanduka «kukwazisa» mubatanidzwa wezvinyorwa zvakatsanangurwa (pakati pemakotesheni) uye kukosha kweshanduko (pasina makotesheni)
Kuva nekunyorera nhevedzano yemirairo mune kodhi nguva imwe neimwe painodiwa kupambadza nguva nenzvimbo. Kunyanya kana iri chirongwa chakazara. Ndokusaka zvakanakisa kushandisa yakasanganiswa yekuvandudza nharaunda uye kunyora chirongwa chakareba (script mune jargon) kuti iitwe gare gare nemuturikiri.
Sezvo chirongwa ichi chinowedzera, zvinokurudzirwa kuigovanisa mumafaira akati wandei kuti igadzirise uye ishandiswe zvekare. Izvi ndizvo zvinoshandiswa ma module.
Ma module mafaera ane tsananguro uye kuzivisa muPython. Iro zita rezita izita remo module inoguma mu .py. Semuenzaniso, isu tichagadzira module inonzi Welcome.py. Mukati me module, zita remu module (se tambo) inowanikwa sekukosha kweshanduko yepasi rose __name__.
Ramba uchifunga zvandataura pamusoro penzvimbo. Ziva kuti yechipiri, yechitatu, uye yechina mitsara yechirongwa inotanga pazasi penzvimbo iri pakati peshoko def neshoko rekuti Gamuchirai. Izvi zvinodiwa nePython uye tichazvitsanangura muzvinyorwa zvinotevera.
Mutsara wekutanga tinotsanangura basa rinonzi Gamuchirai. Mitsara mitatu inotevera ndiyo mirawo inofanirwa kuitwa nguva dzese basa parinodaidzwa.
Mutsara wechishanu tinotsanangudza zvirimo zvekushambadzira zvinoshandiswa kuti yekupedzisira kuraira kwebasa kunoda kupurinda meseji yekutambira.
Nemutsara wekupedzisira wechirongwa, isu tinoita basa racho.
Ngatiedzei chimwe chinhu. Gadzira mafaera maviri. Imwe inonzi Welcome.py uye imwe bvunzo. py.
Mu Welcome.py nyora iyi mitsara:
Mu test.py nyora:
Izvo zvatiri kuita kupatsanura basa uye iro basa rekufona mumafaira maviri akapatsanurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Zvizhinji nezve Python. Izvo zvikamu zvemutauro
Plasma System Monitor, kutsiva KSysGuard, uye Plasma Disks inosvika Kubuntu 21.04 Mazuva ese Kuvaka